Hodges Connect dia manampy amin'ny famenoana ny banga amin'ny fahaiza-miasa »University of Hodges
manam-pahaizana, Hodges Connect
Ny oniversite Hodges dia manampy amin'ny famenoana ny banga amin'ny mpiasa miaraka amin'i Hodges Connect
Hodges University dia mamaly ny antso ho amin'ny fampandrosoana ny fahaiza-miasa amin'ny alalàn'ny fanofanana matihanina ataontsika, Professional Education and Training (PET), antsoina hoe Hodges Connect.
Hodges Connect dia momba ny fanomezana ny mpiasanay sisiny fifaninanana ary natao hanomanana ny mpiasa miaraka amin'ny fahaiza-mitaky ny mpampiasa ilaina hahomby. Ny atrikasa sy kilasy ao anatin'ny sehatr'asa Hodges Connect dia azo namboarina ho an'ny indostria rehetra ary misy ho an'ny olona na vondrona orinasa.
Ny fampandrosoana ny fahaiza-miasa dia misy:
Fiofanana ho an'ny mpanara-maso voalohany natao ho an'ny varotra fananganana sy fitrandrahana, mekanika, mpanamboatra sy mpanamboatra, varotra tsy fivarotana, birao sy fanampiana ara-pitantanana, serivisy manokana, varotra antsinjarany, fikarakarana trano sy fidiovana, haingon-trano sy serivisy ahitra, ary mpiasan'ny fiara sy milina ary fiara.
Fiainam-piainana fototra, famelomana ny fiainana fototra ary fanampiana voalohany an'ny Heartsaver CPR AED.
Fandaharana teknolojia ho avy tsy ho ela ao anatin'izany ny AutoCAD sy ADOBE Software Applications.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Hodges Connect, vakio ny lahatsoratra fanontana iray manontolo Naples Daily News.
Tags: Hodges Connect, PET, Fampiroboroboana ny fahaiza-miasa